ပို့စ်တင်ချိန် - 7/31/2014 09:57:00 AM
မနေ့က စပြီး အဲ့ စတေးတပ်တစ်ခု ကျွန်တော်စတွေ့ တယ် ဗျ နောက်တော့ သတိထားမိသွား တာ ဖဘ ကမိန်းကလေး တော်တော်များများ ရှဲ ကြတာနဲ့ သတိထားမိနေတာ ဗျာ အဲ့ စတေးတပ် ကဘာတဲ့
“ထမင်းချက်ကောင်းတဲ့ လူကိုသဘောကျရင် အန်တီ့သားကို အိမ်ဖော်နဲ့ပဲ ပေးစားလိုက်ပါတဲ့ ”
သိပ်နည်းလမ်းမကျ သလိုပဲဗျ ကျွန်တော်မှားတယ် မှန်တယ်မပြောဘူးနော် နည်းလမ်းမကျဖူးလို့ပဲပြောချင်တာ ဒီစတေးတပ် ကို ဘယ်သူက စရေးသလဲ ဆရာမဂျူးတော့ဟုတ်ဟန်မတူဘူး အမေရိက က သမီးတော်ကြီးပဲလား ဟိုမိန်းမဝါဒီ ပေ့ခ်ျ ကပဲလား ခပ်ပေါပေါမြန်မာကားတကားကပဲလား
တင်စီးတဲ့ ယောက္ခမလောင်းကို ကြည့်မရတာနဲ့ ခပ်ရွဲ့ ရွဲ့ပြောလိုက်တင်လိုက်တာ နေမှာပါ ကြီးကြီးမားမား တွေးထား ရည်ရွယ်ထားဟန်မတူာဘူး ကျွန်တော်မသိပါဘူး ။
ကျွန်တော် သည် လည်း မဟာပုရိသ ယောကျာင်္း ဝါဒီ မဟုတ်သလို
ယောကျာင်္းမုန်းဝါဒ မဟာ ကုတ္တိယ ဝါဒကိုလည်း အားမပေးပါဘူး ။ ယောကျာင်္း မကောင်းဘူးတွင်တွင်ရေးပြီး ယောကျာင်္းနဲ့ မကင်းနိုင် ပရိုဖိုင်ထဲတောင် ယောကျာင်္း ပုံကြီးတကားကား နဲ့ အကိုးကွယ်ခံ U S မျေက်မောင်းမ အခွက်နဲ့ မယ်တော်ကြီးတွေကလည်း ရှိသကိုး။ ကိုယ်ကမကင်းနိုင်ဘူးလေ မကောင်းမပြောဘူးပေါ့ခိခိ ..
တကယ်တော့ ယောကျာင်္းမှကောင်းတယ် မိန်းမမကောင်းဘူး ဘာညာ မရှိပါဘူး ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတာလည်း လူတွေပါပဲ လိင် နဲ့မဆိုင်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့တောင် အမေနဲ့ အဖေ ၂ယောက်ပေါင်းပြီး မှလူဖြစ်လာရတာ မလား ?
ထားတော့ ခုနစတေးတပ်စ် ကိုပြန်ကြည့်ရအောင် ရေးတဲ့သူကို ထားလိုက် သောင်းသောင်းဖြဖြ Like ကြတဲ့ မမများကို ကျွန်တော်မေးချင်တာ က ….
မြန်မာပေါပေါကားတွေ ကိုယီးယား အိမ်ထောင်ရေးကားတွေကြည့်ပြီ ချွေးမဟူသည် ယောက္ခမ နဲ့ ever ရန်သတ်ရမယ် ဆိုတဲ့ idea သူတို့ သစ်ကြားသီးသာသာ ဥနှောက်ကလေးထဲ build in များပါနေသလား ?
ထမင်းဟင်းအချက်အပြုတ်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းသည် အိမ်ဖော်လား ?
အလှအပမကြိုက် big eyeမ တပ် တကိုယ်လုံးဘရန်းဆင် သူဌေးသားဘဲကိုထား ကလပ်ကိုသွား လှလှပပ ကြွကြွ ရွရွ မနေပဲ မီးဖို ချောင်ထဲ ဆီးဂျီးပေ မီးသွေးပေ တကုပ်ကုပ်နဲ့နေနေရင်ပဲ တောကျနေ date out နေပြီလား ခေတ်မမှီတောဘူးလား အိမ်ဖော်ဆန်နေပြီလား?
်ထမင်းဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ နင်တို့အမေ အဘွား ကကော အိမ်ဖော်မ ကြီးတွေ ဟုတ်ခဲ့လို့လား လို့ ငပေါက်တို့ မေးလိုက်ချင်တာ နှုတ်ခမ်းပေါ် ခူယားနဲ့ ဘောက်ဖတ် discoတွဲကနေ သလိုပဲ ပါးစပ်ကိုယားလို့ …
ထားလိုက်ပါ တခါကဟာသ လေးတောင်ကြားဖူးပါတယ် “ကျွန်မ လက်ရာက ရှင့်အမေ တဝက်တောင်မကောင်းဖူး ဆိုရအောင်ရှင့်ဝင်ငွေ ကကောကျမအဖေ လေးပုံတပုံတောင်ရှိလို့လား ဆိုတဲ့စကားလေးပါ ” ဟုတ်ပါတယ် အခုခေတ် က အိမ်ထောင်ဦးစီး တယောက်အလုပ် လုပ်ရင် တမိသားစုလုံးစားလို့ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ပါဘူး လင်ရောမယားရောယဉ်ဘောင်တန်း အလုပ်သွား ရှိတာ ဝယ်စား ချိုင့်ဆွဲစား နေရတဲ့ ခေတ် အဲလိုမျိုး မအားလို့ ရုန်းကန်ရလို့ ဆိုရင်တမျိုးလေ
အခုဟာက ” ဟင်နင်ယောကျာင်္း ယူတော့မလို့လား ထမင်းရောဘယ်လို လုပ်မလဲ ဘယ်သူချက်မလဲ ?”ဆိုရင် “သိပုလေ သာမီးက ထမင်းချက် အိမ်ဖော် အဒေါ်ကြီးတယောက်လောက်ခေါ်ထားမပေါ့ ” ဆိုတဲ့ ခပ်တိမ်တိမ် အတွေးနဲ့ ဘော်ကြော့ ကလေးမတွေများလာတဲ့ခေတ် တကယ့်လွယ်ကြောခေတ် ထမင်းဟင်းချက်တတ်ရင်ကို အောက်တန်းကျတယ် သေးနှပ်တယ်လို ထင်နေတဲ့သူဌေးသမီးဘော်ကြော့မမတွေ ရဲ့ခေတ်ဗျ။
ဘာပဲပြောပြော ယောကျာင်္း ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အိမ်သူသက်ထား လက်ရာလေး စားဖူးကြ ချင် ကောင်းတယ်ကြွားဖူးချင် သူငယ်ချင်းတွေအိမ်ခေါ် ကြွေးဖူးချင် ကြတာချည့်းပဲ မယုံရင် ကြိုက်တဲ့ယောကျာင်္း ဘီယာတိုက်ပြီးမေးကြည့် ဗျာ ။
ကိုယ်တိုင်ချက်တတ် ပြုတ်တတ်ထားတော့ ဟော ဟိုဟင်းကဘယ်လို လူဘယ်ရောက်စာ ဘယ်နှစ်နပ်ဆို ဆန်က နိူ့ဆီဘူး ဘယ်လောက်ကုန်မယ် ကြက်သွန် အာလူး ကဘယ်ဈေး ဘာကြော်ရင်ဘာဆီ ဘယ်လောက်ကုန်မယ် ပုဇွန်ခြောက်က ဘယ်လို ကိုက အသေးစိတ်သိထား တတ်ထား ချက်တတ်ထားတော့ အိမ်ဖော် ဘတ်တာ အလုပ်သမား ချိုတာ ခိုးတာ မခံရတော့ဘူးပေါ့ ။ မဟုတ်ဖူးလား
ကျွန်တော့အမေအပါ အဝင် သူငယ်ချင်းအမေတော်တော်များများဆိုရင် အိမ်မှူကိစ္စ အတော်နိုင်နင်းတယ် အဝတ်လျှော် မီးပူတိုက် အိမ်သန့်ရှင်းရေး မှန်တိုက်တာ ကြမ်းတိုက်တာ ကအစ အိမ်ဖော်အသစ်တွေလာရင် သူတို့က အရင်သင်ပေး လုပ်ပြပေး ခဲ့တာ ချည်းပဲ ကျွန်တော်သိရသလောက် တော့ ။ အဲ့တော့ အိမ်ဖော်ကလဲရှိန်တယ် ခိုင်းရင်မကပ်ရဲတော့ဘူး မခိုးရဲဘူး ။
အခုခေတ် မိန်ကလေးများကတော့ မဟုတ်ဖူး ဘာတွေ သွေးကြီးနေကြလည်းမသိဘူး မီးဖိုချောင် ကိစ္စ ကို အိမ်ဖော်ကိစ္စ လို့ တရားသေတံဆိပ်ကပ် ကုန်ကြပြီ ။ ကြည့်နေ ပါ သူတို့ ကသာ မိန်းမတို့ တပ်အပ်သော အိမ်ထောင် ထိမ်းသိမ်းမှူအတတ် မသင်ချင်ကြတာ အောက်ကျတယ် ထင်ချင်ကြတာ လိုချင်လိုက်ရင် ဖြင့် ငွေရှာတော် ချစ်ခင်ယုယ တတ် ကြင်နာတတ် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်း ယောကျာင်္းပီပီသသ တာဝန်ယူတတ် စောင့်ရှောက်တတ် တဲ့ အားလုံးပါဖက် ဖြစ်တဲ့ ၃၆ ပစ်ကင်း အပွန်းအခြစ်ရာ မပါတဲ့ လူမျိုး လိုချင်ပြပါလိမ်မယ်ဗျား ။
သူတို့ကသာ ထမင်း မချက်ချင်ကြတာ ယောကျာင်္းလေးကြ ရည်းစားဘဝ ကထဲ က “ယောကျာင်္းဖြစ်ပြီး ငါ့ဖုန်းလေးတောင် မပြင်တတ်ဖူးလား”တို “အိမ်ကကွန်ပျူတာ ပြတင်းပါက်ကျကွဲ သွားလို့ လာပြန်တင်ပေးပါဦး” “ဖောမက်ရိုက်ပါဦး ပါတေးရှင်းလုပ်ပါဦး
ဖုန်း ကို Factory restart လုပ်ပေးပါဦး” “တို့ ဘယ်လမ်းမှာ ကားပျက်နေတယ်လာနှိုက်ပေးဦး ကားစက်ဖူံး ဖွင့်ပြီးတော့ ”
“ခေါင်မိုးပေါ်က ကြောင်လေး ပြန်ဖမ်းပေးပါဦးတို့ ” ခိုင်းပြပါလိမ့်မယ်
” မလုပ်တတ်ဖူး “တခွန်း ပြောကြည့်ပါ့လား ယောကျာင်္းဂျီး ဖြစ်နေပြီး ဒီစက်ကလေးတောင်မလုပ်တတ်ဖူးလား အားမကိုးရဘူး ဘာညာ ဘော်လီစက်စမိုင်နာ အဲလေ ဘော်ဘီဆော့ဆာ ရှူံးအောင် ပတောက်ပတောက်ပြောပြပါ လိမ့်မယ် ကြည့်နေ ။
ရှေးရှေးကြမ်းတွေမှာ မိန်းမတယောက်ရဲ့ ကောင်းခြင်း အင်္ဂါရပ်တွေထဲမှာ ဆံပင်ရဲ့ကောင်းချင်း အသားအရေ အပြောအဆိုအနေအထိုင် မျက်လုံးမျက်ခုံး ဘာညာ အစ အစချီပြီး အိမ်ထောင်နိုင်နင်းမှုနဲ့ အရေးတကြီး အဆုံးသတ် ပါ တယ် ။ ကိုယ့်ဖက် က ပြည့်အောင်မဖြည့်ဘဲနဲ့ တော့ ပြည့်စုံ တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး ။ ကိုယ့်ဖက်က ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ကို ဘာလေးလုပ်ပေးလိုက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်မရှိဘဲ ဘာအခွင့်အရေးပဲ သူဆီက ယူလိုက်မယ် ဆိုတာပဲတွေးနေရင်တော့ ကိုယ့်လို လက်တွဲဖော်နဲ့ပဲတွေ့ မှာပါပဲ ။
ခုဏ က “အန်တီသားကို အိမ်ဖော်နဲ့ ပဲ့ ပေးစားလိုက်ပါ “လို့ ပြောတဲ့ မမ များလဲ ထမင်းမချက်ခိုင်းပဲ ထမင်းဖိုးဈေးဖိုး ပေး အိမ်တလုံးဝယ်ပေး အိမ်ဖော်တွေထားထားကလေးဖိုးပေးပြီး ပြီး ကိုယ့်ကို မချစ်တတ် မယုယတတ် ပွဲထုတ် မပြတတ်တဲ့ လက်ပါတတ် တဲ့ ငွေဝယ်အရုပ်လို ယောကျာင်္း နဲ့ညားရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
“ချစ်ကလေး ထမင်းမချက်နဲ့မောင့်ကိုထိုင်ကြည့် ထမင်းဝတယ် မောင်ချစ်ပြ ယုယပြ မယ် ကိုယီးယားမင်းသား လို နုရွ အုကြွ ဖုထ (ကြွက်သားတွေပြောပါတယ် ) လုပ်တတ် တယ် ပိုက်ဆံတော့ မရှာတတ်ဖူး အိမ်ထောင်မထိမ်းသိမ်း တတ်ဖူး ချစ်မှန်တင်ခုံပဲ လုတတ်တယ် ကိုယ့်ကိုလှအောင်ပဲ လုပ်တတ်တယ် ” ဆိုတဲ့ ယောကျာင်္း မျိုးရော လိုချင့်ပါ့ မလား စဉ်းစားရင် မေးရင် အများကြီးပါ ….
ဟုတ်ကဲ့ အထက် ကstatus ကို like ကြ share ကြတဲ့ မမ များထမင်းမချက်တတ်ပဲ အိမ်ထောင်မထိမ်းသိမ်း တတ်ပဲ ယောကျာင်္း အကောင်းစား လိုချင်ရင်တော့ သူဌေးမယားငယ်ပဲ လုပ်လိုက်ပါ လို့ မရေးချင် ပေမဲ့ မိုက်မိုက် ရိုင်းရိုင်း ပြန်ရေးပါရစေ ခင်ဗျာ ။
ဘဝ မှာ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ကိုယ်စိုက်ပျိုးတာ ပဲ ကိုယ် ရိတ်သိမ်း ရတာပါ။ချစ်မှုကြိုက်မှု အိမ်ထောင် ပြု တဲ့အမှုမှ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်အလုပ်မဆို ကိုယ့်ဖက်ကအရင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမှ ပြီးပြည့်စုံချင်းကကိုယ့် ကိုလက်ကမ်း မှာပါ ဒါတောင်မှာ အခြေအနေ အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီး လူ့ဘဝ ရလာဒ် ကအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသေးတယ် ။မသေချာပါဘူး …
မရင့်ကျတ်သေးတဲ့ ဖဘပေါ်က မမများ ကလေးမများ သမီးပျို အပေါင်းကိုပြောချင်တာ ကိုယီးယားကား မြန်မာကား များ နတ်တမျှဗြမ္မာတမျှ လှပကျော့ရှင်း စိတ်ကူးရင် ဝထ္တု များ အိပ်ယာဝင် နတ်သမီး ပုံပြင်များ ကနေ နိုးထပြီး တကယ့်လောကကြီးကို တချက်လောက် မျက်စောင်းထိုးကြည့်ပေးကြပါဦးလို့ ။
( အမျိုးသမီး ထုကို လေးစား သမှု စေတနာအစု ဖြင့် အမုန်းခံကာတင်သည် ကလော် တုပ်လိုက စလာတုပ်နိုင်ပါပြီ )
တန်ဖိုးမျှတ အိမ်ရာတိုက်ခန်းများ ပြန်လည်ရောင်းချမှုမ...
Viber က မြန်မာ့ရေခံမြေခံနှင့် ကိုက်ညီသော စတစ်ကာရုပ...
အပူ သောက ငြိမ်းစေရန် နည်းလမ်း
Photoshop နဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့ သူမရဲ့ကိုယ်တုံးလုံးပုံေ...
ဈေးနှုန်းကမောက်ကမများဖြင့် အူရီးဒူးဖုန်းများ ဈေးက...
၃၅ နှစ်အရွယ် ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ပေးစားလို့ မီးရှို့...
သင်မွေးမယ့်ကလေးရဲ့ လိင်ဟာ သင့်ရဲ့အစားအသောက်အပေါ်မှာ...
ဝန်ကြီးလောင်း ဦးရဲထွဋ် လွှတ်တော် အဆုံးအဖြတ် စောင့်...
တေးရေးတွေ ရပိုင်ခွင့်အတွက် တောင်းဆိုမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြ...